Nhanho gumi: Maitiro Ekugadzira Yakabudirira Nhare Kunyorera
A12 Bionic chip, AI maapplication, Analytics, Android, Anokudziridza App, Mirayiridzo yeApp Store, App Store Kuita, App Store Kurambwa, apuro, chakagadzirwa Intelligence, Dhizaini Yemaitiro, IPad, mobile app development, Mobile Applications, Mobile Apps, nhare mbozha kusimudzira, Mobile Marketing, Kufanotaura Ongororo, WWDC
Munyika yanhasi inokurumidza kufamba, mushambadziro weapps iri kuwedzera nekukwira uye nemuganhu. Naizvozvo, mobile marketing mazano ari kuwedzera kukwikwidza. Kuti uve nechokwadi chekuonekwa kwemaapps mune yakaoma mamiriro, vagadziri veapp vanofanirwa kuve nehanya zvakanyanya nezve nzira iri kuteverwa mobile app development (kusanganisira maapplication emitambo). Kuti ugadzire yakabudirira nharembozha application iwe unofanirwa kuteedzera yakarongeka nzira kune iyo famba kuvandudza kweApp lifecycle. Isu takapfupikisa nhanho gumi dzekugadzira yakabudirira nharembozha yekukubatsira iwe munzira iyi.
Isu takarongedza mhinduro mhinduro kune yega indasitiri iyo inopfupisa zvazvino maitiro uye zvitsva zvichauya. Tora chirevo chako izvozvi!
Aya matanho gumi ekugadzira Yakabudirira Mobile App
Matanho ekutevera kune akabudirira nhare yekushandisa
Nhanho 1: Inobudirira nhare mbozha inotanga neapp zano
Kuti ugadzire yakabudirira nharembozha, chinhu chekutanga chaunofanira kuchengeta mundangariro ndechekuti:
Ziva dambudziko rinogona kugadziriswa neapp yako
Sarudza maficha eapp yako
Iyo app inofanirwa kupa mutengi mabhenefiti anooneka kusanganisira kudzikisira mutengo kuburikidza neanogadzira zvigadzirwa, mari nyowani kana kugadzirisa ruzivo rwevatengi.
Nhanho 2: Kuzivikanwa / kujekesa
Kuti ugadzire yakabudirira nharembozha, unofanirwa kuziva kana kujekesa nezve:
Vashandisi vekushandisa - An app inofanirwa kugara ichigadziridzwa ichichengeta mupfungwa dzevashandisi vekushandisa. Kuva nechiono chakajeka maererano neboka rakanangwa, wedzera chikamu chebudiriro cheapp.
Mapuratifomu epamba uye zvishandiso zvinotsigirwa - Nharembozha mapuratifomu uye zvishandiso zvinofanirwa kusarudzwa zvichichengeta mupfungwa mashandiro ehurdware, hupenyu hwebhatiri, kuomarara uye zvinongedzo zvinodiwa. Zvimwe zvinhu zvinoda kutariswa paunenge uchisarudza mapuratifomu uye zvishandiso zvinosanganisira kufukidza, rutsigiro rwechigadzirwa, mashandiro uye zvimwe zvinhu.
Revenue modhi - Iwo musika weapp urikuwedzera zvakanyanya zvisati zvamboitika. Kuona ino sosi uye kuburitsa mari , mugadziri wepurogiramu anofanira kusarudza nzira yakakodzera zvinoenderana neapp. Kune akasiyana mamodheru e kuburitsa mari kubva Mobile mafomu izvo zvinosanganisira kubhadhara zvakanyorerwa, zvakasiyana app uye in-app freemiums, kushambadza, kunyorera uye kubhadhara pakukopa .Maitiro aya anogona kushandiswa kuunza mari. Nekudaro, nzira yekuvandudza inofanirwa kunge ichienderana nechishandiso. Izvo zvakakosha zvakanyanya kuti mugadziri akwezve mushandisi uye shandisa mari pazvinhu zvakasiyana zvekushandisa.
Panguva ino iwe unofanirwa zvakare kufunga nezvemari yako, imarii yaunoshuvira kuisa parutivi kusimudzira, kushambadzira uye pakupedzisira kuburitsa yako app. Heano a kukurumidza gwara kumitengo inofungidzirwa yekuvandudza chirongwa.
Nhanho 3: Gadzira yako app
Kugadzira yako app ndechimwe chinhu chakakosha chinotungamira mukubudirira kweapp mumusika. Rangarira, yakanaka UX dhizaini uye yakanaka UI-UX zvinoreva kuwanikwa kwakanaka. Anogadzira Anwendung anofanirwa kutarisisa paUI dhizaini, akawanda-ekubata maoko ekugunzva-anogoneswa michina uye funga chikuva dhizaini zviyero futi. Nhasi, kusimbiswa kuri pa UI dhizaini yeapp sezvo ichiita basa rakakosha mukubudirira kweapp. Huwandu hwekudhonza uye kudonhedza vavaki veapp vanowanikwa mumusika. Kugadzira Anwendung iri kuramba ichiwedzera kufarirwa sezvo ichigadzira iko zvinoitika kune pfungwa yemushandisi uchiona kushandiswa kweapp.
Kana iwe uchida kutarisa zvakajairika mafoni dhizaini mapatani, iwe unogona kutarisa mukati:
Nhanho 4: Ziva maitiro ekuvandudza iyo app - yemuno, webhu kana musanganiswa
Kusarudza nzira chaiyo yekugadzira app kwakanyanya kukosha. Sezvineiwo, iyo yekumashure kuvandudzwa kweapp kunofanirwa kunge kuchienderana nenguva uye bhajeti zvinonetsa zvemutengi. Vazhinji vevanogadzira maapp vanofarira kuteedzera nzira yeagile.
Native: Native maapplication anogonesa mukuendesa yakanakisa mushandisi ruzivo asi inoda yakakosha nguva uye hunyanzvi kuvandudzwa. Aya maapplication ari pachikuva chaiwo uye anoda hunyanzvi pamwe neruzivo. MaNative maapplication anodhura pamwe nekutora nguva kutora kuvandudzwa uye kununura yakanyanya mushandisi ruzivo pakati penzira dzese.
Nhanho 5: Gadzira chirongwa cheapp
Chikamu chinotevera, mushure mekuziva nzira yacho iri kugadzira prototype. Icho chaicho chiitiko chekutora zano rako uye nekuchichinja kuita chishandiso nechimwe chinhu chakakosha mashandiro. Prototype inoita kuti zvive nyore kwazvo kutengesa zano rako kune vangangove vatengi vanogona izvozvi kunyatsoona iwo mabhenefiti anooneka pane kungoona kana kuverenga rondedzero yechigadzirwa. Izvo zvinobatsira kwazvo mukukwezva varimi uye kushanda nevagadziri uye nekuwana marezinesi. Iwe unogona zvakare kugovera iyo prototype app pamwe nemiedzo yekuyedza kuyedzwa uye uwane zano reizvo zvinoda kuchinja kuti riite inobudirira nharembozha.
Kunyangwe iwe uchishanda pane prototype, ita shuwa kuti iwe unotora matanho ku chengetedza app yako kupokana nekushandiswa kusingabvumirwe uye kuwana kune data.
Pasina chirongwa chekushambadzira chikumbiro chako, zvakaoma kwazvo kumisikidza mumusika. Dhawunirodha yedu yemahara eBook iyo ichakubatsira iwe kugadzira iyo nhare mbozha yekushambadzira chirongwa.
Nhanho 6: Sanganisa chakakodzera analytics chishandiso
Iko kune zvakare kudikanwa kwekuisa akakodzera analytics iyo inokupa iwe yakadzama pikicha yekuti vangani vashanyi vanoshandisa mawebhusaiti ako, mauyiro avakaita pane yako saiti uye kuti vangaramba sei vachidzoka.
Mamwe eiyo mobile analytics chishandiso chinobatsira mune ino maitiro:
ne data sainzi, kusanganisira predictive analytics kuuya muma mobile apps, zvinogona kuita kuti maapps ako atengese zvakanyanya.
Nhanho 7: Ziva vaedzo vako: Teerera kwavari uye sanganisira inoenderana mhinduro
Beta kuyedza ndiyo yekutanga mukana wekuwana mhinduro kubva kune vako vavanotarisira vatengi. Iyo inonyanya kukosha sezvo ichiwedzera kuoneka kwako muchitoro cheapp. Izvo hazvingoderedze njodzi yechigadzirwa asi zvinokutorera iwe iyo yekutanga Push muchitoro cheapp. Kuziva beta testers nderimwe basa rakakosha kuti ubudirire nharembozha
Kugadzirira beta kuvhura:
Tsanangura chinangwa mutengi - Izvo zvakakosha kuziva uye kutsanangura zvakajeka vateereri vako vavanoda. Izvi zvinokugonesa kuona vayedzi vakakodzera panguva yako yekutora beta tester. Kurumidza kutsvakurudza misika inobatsira mukunzwisisa ongororo yemusika iyo inorerutsa maitiro ekuyedzwa kwebeta.
Bvisa bugs - Usati waedza beta kuedza kwako pane akasiyana mapuratifomu iwe unofanirwa kufunga nezvakawanda zvemidziyo iyo inobvisa michina yakatarwa madhigi. Alpha kuyedza nenhamba diki yevashandisi inogonesa kuburitsa huwandu hwakawanda. Panguva imwecheteyo, chirongwa chekufukidza chishandiso chakakosha kune vimbiso yemhando yefoni nhare.
Ziva zvinangwa - Beta kuyedza ndiyo yakanakisa mukana wekuwana chaiyo mhedzisiro kubva kune vanotarisira vatengi. Inopa mukana wakanaka wekuenderera mberi nekunzwisisa misika yezvinangwa uye zvavanoda. Kuziva zvibodzwa zvekuyedza beta kunobatsira mukutarisa kuedza. Izvi zvinangwa zvinoderedza chigadzirwa chako kutanga njodzi.
Nhanho 8: Sunungura / Shandisa iyo app
Kuisa Anwendung kunoda kuronga, kuronga uye kutonga kwekufamba kwekuburitswa kuyedza uye kurarama nharaunda. Chinangwa chikuru cheDhipatimendi Rekutungamira ndechekuona kuti kuvimbika kwenzvimbo mhenyu kunochengetedzwa uye kuti zvikamu zvakanaka zvinoburitswa.
Unofanira Kuverenga: 10 Njodzi Dzakakura Kwazvo kuApple Apps Chengetedzo
Nhanho 9: Tora ma metric
Pakave nekukwira kwakakura muvashandisi veapp mobile mumakore gumi aripo. Nekuda kweizvozvo, iyo kudiwa kwekutora chaiyo metric yakakosha zvakanyanya. Sehuwandu hwevatengi vanoshandisa Mobile mafomu zvakadzikama zvinokwira, kudiwa kwekutora chaiyo metric kubva kwavari kuri kuwedzera kukosha. Nehurombo, dzakawanda nzira dzaishandiswa pima maapplication zvinotorwa kubva pawebhu analytics.
Mahara ekuisa metric ayo anofanirwa kuchengetwa mundangariro:
Kuongorora kwefanera kunoratidza kuti sei vashandisi vari kukundikana kupedzisa zviito zvevashandisi zvinodiwa zvinosanganisira mukutenga-mukati-app kana kudzvanya kushambadza
Kuyera kugovana munharaunda kunoratidzira izvo zvinhu zveapp yako zviri kutora kutariswa kwevashandisi vako
Inoenderana data revanhu nehunhu hwevashandisi
Yekutevera nguva nenzvimbo zvinokupa ruzivo mune izvo zvinoshandiswa neapp yako
Chekupedzisira, kutora hunobuda hunhu hweako mushandisi base kwakakosha
Nhanho 10: Natsiridza yako app nekuvandudza uye nyowani maficha
Mushure mekutapa iyo metrics zvinova zvakakosha kukwidziridza yako app pamwe nekuvandudza uye nehunyanzvi maficha. Iyo mobile app isina hunyanzvi maficha inorasikirwa nekushandiswa kwayo mukufamba kwenguva. Kukwidziridza programu yako neyakajeka maficha inowedzera kuoneka kwayo pamwe nekutora kweapp. Uyezve ita chokwadi chekuchengeta kugadzirisa yako app kusangana nemitemo mitsva inopihwa nemapuratifomu akasiyana siyana, usarega maapplication ako akamira.
Aya ndiwo mamwe ematanho ayo anofanirwa kutarisirwa mukati mukugadzira app. Uchishandisa matanho aya, iwe unogona kugadzira chirongwa chekuona kubudirira mukufamba kwenguva. Nekudaro, zvinosvika zvisingaite kunyora pasi chaiwo matanho anoitisa kuti ubudirire seapp.
Bhonasi Nhanho 11: Shambadza yako app kurudyi
Kunyangwe izvi zvisingawire pasi pematanho eku "gadzira" Anwendung, zviri pachena kuti zvakakosha kuita kuti yako app ibudirire kunyanya kumabhizinesi madiki. Kana usinga musika app yako zvakanaka kana yangoburitswa, pane mukana mukuru wekuti irasikirwe muhuwandu hwemaapplication anowanikwa pane akasiyana android uye apple app zvitoro. Saka ita shuwa yako musika app yako zvakanaka. evanhu vezvenhau inogona kuva chishandiso chinobatsira pano. Iri nhanho yebhonasi yekugadzira yakabudirira nharembozha asi zvinokurudzirwa zvakanyanya kuti iwe uishandise iwe pachako kubatsirwa.
Tanga izvozvi uye shandisa foni kusimudzira bhizinesi rako!
Unoda rubatsiro mukuvaka kana kuendesa yako app? Taura nekutaurirana